I-China i-automatic water cascading inzalo yokuvala inzalo embonini yokudla okusemathinini nesiphuzo Ukukhiqiza kanye Nemboni |Shenlong
1. Impendulo yethu iphephile:
3. Ifakwe isishintshi sokushisa sepuleti, amanzi acutshungulwa awathinti amanzi okupholisa nesitimu kuyo yonke inqubo ukuze kugwenywe ukungcoliswa kwesibili kokudla.
4.Kusetshenziswe inani eliphansi lamanzi okucubungula, yonga isitimu namanzi.
1. Ngomshini wokushisa wokupholisa, amanzi okucubungula awaxhumani namanzi okupholisa kuyo yonke inqubo ukugwema ukungcoliswa kwesibili kokudla.Futhi ukhiphe ngamakhemikhali okwelapha amanzi.Ngaleyo ndlela finyelela umphumela wokuvala inzalo kwezinga lokushisa eliphezulu ngesikhathi esifushane.
2. Inani elincane lamanzi acutshungulwayo lingajikeleza ngokushesha ukuze lifudumale ngokushesha ezingeni lokushisa lokusetha inzalo.
3. Ukulawula ukucindezela okuphelele kuqinisekisa yonke inqubo yokukhiqiza, ukucindezela ngokweqile kusetshenziselwa ukuvumelanisa nezinguquko ekucindezelweni kwangaphakathi kokupakishwa komkhiqizo, ukuze izinga lokuguqulwa kokupakishwa komkhiqizo libe lincane.Ifaneleka ngokukhethekile ukupakishwa kwegesi namabhodlela engilazi.
4. Uhlelo lokulawula oluthuthukisiwe noluzinzile lwe-SIEMENS luqinisekisa ukuthi amakhasimende angathola ngesikhathi uchungechunge lokuhlinzeka emhlabeni ukuze kuncishiswe isikhathi sokuphumula.
I-5.I-stainless steel surface of retort body is frosted ukuze kuthuthukiswe ubulukhuni obungaphezulu nokumelana nokugqwala, ikakhulukazi ukumelana nokugqwala kwe-chlorine engezwe emanzini apholisayo.
I-Retort/Autoclave yethu ingaklanywa ngokuya ngezidingo zekhasimende
Icala lethu lekhasimende
Okwedlule: Ingxubevange yokupheka yokupheka yePlanethi Yekhwalithi Yezimboni ethengiswa kakhulu
Olandelayo: Ukuvala inzalo ku-Steam I-Autoclave Retort ye-sardine kanye ne-tuna equkethe i-retort yokudla okusemathinini